Showing 1-10 of 1,231 items.
गर्मीेमा खरबुजा खाँदाका फाइदाहरु
गर्मी मौसमा खरबुजा अधिकांसको रोजाइमा पर्ने फल हो र खरबुजामा ९५ प्रतिशत पानी हुनुका साथै भिटामिन तथा विभिन्न खाले लवण पनि प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले शरीरलाई शीतल बनाउने, सरीरमा डिहाइड्रेसनको खतरा .....
यस्ता छन् दालचिनीका फाइदाहरु
दालचिनी अधिकांशको भान्सामा सहजै पाईन्छ। खानामा दालचिनी मिसाएर बनाउँदा खानेकुराको स्वाद बेग्लै हुन्छ। स्वादको लागि मात्र नभई दालचिनी कयौ रोगका घरेलु उपचार पनि हो। दालचिनी एक मात्र नभई धेरै प्रकारको हु .....
महिनावारी हुँदा अधिकांश महिलाहरुको पेट दुख्ने गर्छ। प्रायःकिशोरीहरुमा १३–१४ वर्षदेखि १७–१८ वर्षसम्मको समयमा महिनावारी नियमित हुने गरेको पाइँदैन। महिनावारीको समयमा कसैलाई धेरै रक्तस्राव हुन .....
पेटका लागि वरदान हो मेवा, जान्नुहोस् – मेवाका ५ फाइदा
मेवा र कागती दुवै स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुन्छन् । पेटका लागि मेवा वरदान हो किनकि यसमा भिटामिन ए, बी, सी र फाइबर भरपूर हुन्छ । कागती खाँदा पेट, आँखा र छालाको समस्या हुँदैन । यसका अतिरिक्त यसमा .....
टाउको दुख्दा, हाडजोर्नी दुख्दा, पहिलो चोटि जिम गरेर शरीरका मांशपेसी दुख्दा अनि शरीरमा विभिन्न किसिमका दुखाइहरू हुँदा अधिकांशले पेनकिलर औषधीको प्रयोग गर्छन्। यो कुरा जान्नुहोस् कि, त्यस्ता .....
चाँडो रिसाउनु हुन्छ ? यस्ता छन् रिस नियन्त्रण गर्ने ९ प्रभावकारी उपाय
रिस कसलाई पो उठ्दैन र रु तर त्यो कति बेर रहन्छ वा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने झन् संवेदनशिल पक्ष हो। धेरै थोरै रिस सबैमा हुन्छ। रिसले शारिरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा स्वास्थ्यमा समेत नराम्रोसँग प्र .....
चिसो बढेसँगै हात फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
जाडो बढेसँगै छालामा सुक्खापन देखिन थाल्छ । जसले गर्दा हात खुट्टा फुट्ने समस्या देखा पर्छन् । सुक्खापनबाट छुट्कारा पाउन नियमित मोस्चराइज गर्नुपर्छ । हातमा रासायनिक औषधिको साटो प्राकृतिक वस्तुको प्रयोग .....
बिहान कालो चिया पिउने की दूध चिया
बिहान उठ्ने वित्तिकै नेपालीहरुको चिया पिउने बानी छ। बिहान ओछ्यानमै चिया पिउने त नेपालीको चलन नै बनेको छ। कतिपय त चिया नपिई नित्यकर्म गर्न सक्दैनन्। अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन्। के बिहान खाली प .....
नियमित योग गर्नुका फाइदाहरु
योग सबै व्यक्तिले गर्न आवश्यक छ । योगको लागि दिनमा ३० देखि ४५ मिनेट सम्म समय खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ । नियमित योगले खानपान र निन्द्रा राम्रो हुन्छ । हार्डजोर्नीहरु बलियो हुन थाल्छन् । आधुनिकताको नामम .....
सफलताको मुल मन्त्र : एकपटक अवश्य पढ्नुहोस, जीवन बदलिन्छ
सफलता मुल मन्त्र । आफ्नो लक्ष्य तिर बढ्दै गर्दा, एक व्यक्ति धेरै पटक आफ्नो विवेक प्रयोग नगरी अरूको शब्दहरुमा अधिक ध्यान दिन सुरु गर्दछ। व्यक्तिको यो बानीले उसलाई सफलताको मार्गबाट ​​पछाडि धकेल्नेछ र अस .....